बिना प्रचार प्रसार रिलिजको तयारीमा 'चङ्गा चेट', कतै हुने त होइन चैट ? – Namaste Filmy
बिना प्रचार प्रसार रिलिजको तयारीमा 'चङ्गा चेट', कतै हुने त होइन चैट ?
कार्तिक ०७ – गत असोज २४ गते घटस्थापनाको दिनबाट देशभर एक साथ प्रदर्शनमा आएको चलचित्र ‘छक्का पञ्जा ३’ ले अझै पनि हल ओगटीरहेको छ । देशभरका हलहरुमा ‘छक्का पञ्जा ३’ हेर्ने दर्शकहरुको अझै ओईरो लागिरहेको छ । ‘छक्का पञ्जा ३’ सँगै असोज ३० गते फुलपातीको दिनबाट प्रदर्शनमा आएको ‘जय भोले’ ले पनि दर्शक तानिरहेको छ । तर ‘छक्का पञ्जा ३’ले जय भोलेलाई समेत असर गरिरहेको छ । यसरी हेर्दा ‘छक्का पञ्जा ३’ले त्यती सजिलै हल छोड्ने अवस्था देखिदैन । यस्तोमा यही कार्तिक १६ गतेबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको चलचित्र ‘चङ्गा चेट’ ठुलो धक्का लाग्न सक्ने देखिएको छ ।
‘छक्का पञ्जा ३’ प्रती घट्दै नघटेको दर्शकको क्रेज र २३ गते अर्थात ९ तारिखमा रिलिज हुन लागेको बहुप्रतिक्षित हिन्दी फिल्म ‘ठग्स अफ हिन्दूस्तान’ यि दुईको बिचमा परेको छ ‘चङ्गा चेट’ । दिन प्रतिदिन ‘छक्का पञ्जा ३’ को वर्ड अफ माउथ राम्रो हुँदै गईरहेको छ । उता अमिताभ बच्चन र आमिर खान अभिनित ‘ठग्स अफ हिन्दूस्तान’ लाई लिएर दर्शकहरु निकै उत्साहित रहेका छन् । यस्तोमा कतै यि दुई फिल्म बिच ‘चङ्गा चैट’ चेपिने त हैन ? भन्ने डर उस्तै रहेको छ । हुनत फिल्मलाई ‘गोजीमा दाम’ छैन बोलको गीतले निकै हाईप मिलिरहेको छ । गीतले युट्युबमा करिब डेढ करोड बराबरको भ्युज पनि पाईसकेको छ । गीत त सुपरडुपर हिट भईसक्यो तर फिल्म पो के हुने हो भन्ने चिन्ता सबैमा छ ।
यसै त फिल्मको प्रचार प्रसारमा निर्माण टिमले खास्सै ध्यान दिएका छैनन त्यही माथि दर्शकको ध्यान पुरै ‘छक्का पञ्जा ३’ ले तानिरहेको छ । अहिले फिल्मलाई हल पाउन गार्हो छ त्यही माथि थोरै हल पाउदा प्रचार प्रसार पनि छैन । यही तरिकाले कतै चङ्गा चेट चैट त हुने होइन ?
फिल्म राम्रो बनेको फिल्म युनिटको दाबी छ । ट्रेलरले पनि केही छनक पक्कै देखाएको छ ।तर ‘छक्का पञ्जा ३’ को बाढी रोक्दै दर्शक तान्न ‘चङ्गा चेट’ लाई सजिलो छैन । १४ दिनमा १४ करोड माथिको ब्यापार गरिसकेको ‘छक्का पञ्जा ३’ ले दर्शकलाई हल सम्म तानिरहदा रहदै हटाएर ‘चङ्गा चेट’ लाई शोज दिने आँट कुनै हलहरुले गर्ने सम्भावना देखिन्न । यसको अर्थ ‘चङ्गा चेट’ ले खास्सै शोज पाउने सम्भावना छैन । अब अझै केही दिन ‘छक्का पञ्जा ३’ ले हल लिने देखिन्छ त्यसपछी ‘ठग्स अफ हिन्दूस्तान’ ले ओगट्नेछ ।
बलिउडका खानहरुको फिल्म भनेपछी विश्वभर दर्शकहरुको उत्साह सोची नसक्नुको हुन्छ । नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो रहेको छैन । यस अघी पनि खानहरुको फिल्मले नेपालबाट टन्नै पैसा सोरेको छ । त्यसमा पनि अमिर खान जसको फिल्म नेपाली बजारमा धमाका मच्चाउदै आईरहेको छ । अहिले ‘छक्का पञ्जा ३’ ले हल छोड्न मानेको छैन अनी अली दिन पछी ‘ठङ्स अफ हिन्दूस्तानले’ । यो स्थितीमा ‘चङ्गा चेट’ चपेटामा पर्ने पक्का पक्की छ ।
अशोक शर्माको नयाँ चलचित्र ‘ रातो टिका निधारमा’को घोषणा, ‘जय भोले’ले पहिलो साता कमायो ३ करोड